Maxay yihiin qodobada Rooble fulintooda uu la kaashanayo maamul goboleedyada? | XORRIYA NEWS
Home Siyaasadda Maxay yihiin qodobada Rooble fulintooda uu la kaashanayo maamul goboleedyada?
Maxay yihiin qodobada Rooble fulintooda uu la kaashanayo maamul goboleedyada?
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo maanta sabti ah Golaha Shacabka horgeeyey xubnaha cusub iyo Qorshaha Golaha Xukuumadda ayaa ka hadlay Qodobo ay mid yihiin qabsoomidda doorashooyinka, adkeynta amniga, horumarinta caddaaaladda, dowlad-wanaagga, kordhinta adeegyada aas-aasiga ah ee bulshada.
Rooble ayaa sheegay in xukuumaddiisu ay wadajir ugala shaqeynayso Dowladaha Xubnaha ka ah DF iyo shacabka Soomaaliyeed suggida aminga xilliga Doorashadda, “Iyadoo laga amba-qaadayo go’aanadii ka soo baxay shirarkii Dhuusamareeb iyo midkii ka danbeeyey ee Golaha Wadatashiga Qaranku ay ku heshiiyeen Muqdisho, 17kii Sebtember 2020” oo lagu qeexayay qaabka doorashooyinka, ergooyinka, deegaan doorashada, qoondada haweenka iyo in ay doorashooyinku ay ku dhacaan waqtigooda.
“Xukuumadda oo kaashaneysa Dowladaha Xubnaha ka Ah DF, waxay dardar-gelinaysaa dadaallada dhammaystirka dib-u-eegista Qorshaha Amniga ee xilligan muhiimka ah. Waxa aan shaki ku jirin in fulinta qorshahan uu siin-doono shacabka, hay’adaha dowladda iyo ciidamada amnigu fursad ay si wadajir ah u sugayaan xasilloonida iyo nabadda dalka”.
Ra’iisul Wasaare Rooble ayaa uga mahadceliyey Golaha Shacabka ansixinta Xukuumadda iyo barnaamijkeeda, “si ay u gutaan shaqooyinka adag ee laga sugayo” waxa uuna sheegay in Xukuumaddiisu ay mudnaan gaar ah siin doonto wax ka qabashada xadgudubyada ka dhanka ah qeybaha bulshada ee nugul.
Maxamed Xuseen Rooble oo ah injineer ku dhashay magaalada Hobyo, bishii Oktoobar 1963, ahna aabe dhalay shan carruur ah marka laga soo tago waqtiga uu heysto oo aad u kooban haddana waxaa sugaya shaqooyin ay ugu wayn tahay hirgalinta qodobadii lagu heshiiyay ee doorashada Soomaaliya.